Varotra hotely India manampy ny mpizahatany tafahitsoka mandritra ny fanidiana
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Varotra hotely India manampy ny mpizahatany tafahitsoka mandritra ny fanidiana
India hotel chain OYO founder Ritesh Agarwal
Mandritra ny fanidiana any India, gadra hotely any India dia mahatratra masoivoho 15 mahery hanohanana ny fanomezana toeram-ponenana ho an'ireo mpizahatany tafahitsoka.
The COVID-19 coronavirus dia misy fiatraikany lehibe amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny iray manontolo manerantany miaraka amin'ny taham-pahavitrihana. Amin'izao fotoana tsy azo antoka sy sarotra izao, ny fanohizany ny ady atao amin'ny COVID-19 sy ny fanohanana ny governemanta India amin'ny ezak'izy ireo hamaky ny rojo sy hitazomana ny fanidiana ny firenena ilaina rehetra, ny Oyo Homes & Hotels dia naka andiany maro hametrahana ireo teratany vahiny tafahitsoka ao ny firenena ary manome fanampiana ireo mpiasan'ny fitsaboana lohalaharana, fiaramanidina, orinasa lehibe, mpizahatany, PG, sy ny toa azy izay mila trano hipetrahana.
Ao anatin'ny fitoriana, ny vondrona hotely dia mifandraika amin'ny iraka diplaomatika maherin'ny 15 any India ary efa nanampy ny mpizahatany vahiny tafahitsoka avy any Etazonia, Brezila, Belzika, Portugal, Aostralia, Chile, Arzantina ary Indonezia amin'ny fividianana trano mandritra ny firenena. lockdown in fananana manerana ny ambaratonga 1 sy ny ambaratonga 2-3 tanàna any India ao anatin'izany ny Mumbai, Delhi, Jaipur, Chandigarh, Rishikesh, Pondicherry, Ranchi, Hyderabad, Jodhpur, ary Jalandhar.
Navoakan'ny governemanta India tamin'ny 24 martsa ny torolàlana ho an'ny minisiteran'ny Atitany momba ny fanidiana ny firenena mandritra ny 21 andro, izay manaiky eo ambanin'ny teboka faha-7, fa na dia hiato aza ny serivisy fandraisam-bahiny dia hatao ireto fanafoanana ireto:
Hotely, trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny, hotely fandraisam-bahiny izay mahazaka mpizahatany sy ireo olona tafahitsoka noho ny fanidiana, mpiasa ara-pitsaboana sy vonjy taitra, ranomasina sy fiaramanidina.
Fotodrafitrasa ampiasaina / natokana ho an'ny fotodrafitrasa karantina.
Nanangana ekipa valinteny haingana ny orinasa mba hahatakarana ny fepetra takian'ireo mpizahatany mihitsoka, nifandray tamin'ny masoivoho, vahiny ary ny minisiteran'ny fizahan-tany ary hotely azo fantarina izay mety ilaina amin'ny ora ilana fanampiana. Mba hiantohana ny fahadiovana sy ny fanadiovana ilaina ary koa ny fiarovana ireo mpiasa eo alohan'izay, ny fepetra ara-pitsaboana sy ara-pahasalamana ary fiarovana rehetra dia ilaina amin'ny fanaraha-maso milamina, araka ny takian'ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny WHO. Ilay orinasa koa dia nanolotra fanavaozam-baovao matetika an'ireo masoivoho voalaza ho amin'ny fahasalaman'ny teratany vahiny.
Ritesh Agarwal, mpanorina sy CEO CEO OYO Hotels & Homes, dia nilaza hoe: "Fotoam-pitsapana ho an'izao tontolo izao izahay ary izahay ao OYO, dia voadonan'ny COVID-19 koa. Samy nilatsaka ny vola miditra sy ny mpiasa. Ny fanoloran-tenantsika ho an'ny vondrom-piarahamonina amin'ny sisa tavela kosa dia tsy mitoby ary te hanao izay rehetra azo atao izahay mba hahazoana antoka fa afaka manome trano azo itokisana ho an'ireo olona tafahitsoka- na ireo mpizahatany, mpitsangatsangana, PG, mpamatsy serivisy ilaina sns, na eo aza ny fitazonana ny fenitra ambony indrindra amin'ny fahadiovana. sy fiarovana ho an'ny vahiny, mpiasa ary mpiara-miombon'antoka. Ny hidin-trano izay inoantsika dia azo antoka fa hanampy amin'ny fanamafisana ny fiolahana ary mijoro tsara miaraka amin'ny Governemanta izahay hanolotra fanampiana ho an'ireo izay sendra sy mila trano hipetrahana. Misaotra ihany koa ireo masoivoho izahay matoky anay amin'ny zavatra takian'izy ireo. Amin'ny maha gadra hotely antsika dia andraikitsika ny mampiseho ny 'Atithi Devo Bhava' mandritra ireo fotoam-pitsapana ireo. Faly izahay noho ny ezaky ny matihanina tsirairay izay manana ny andraikitr'izy ireo ho lohalaharana amin'ny tolona ataon'ny India amin'ny COVID-19 ary tianay ny hanao ny kely indrindra amin'iny ady iny. ”
Ny orinasa dia mifantoka amin'ny paikady roa misy rindranasaina mba hampihenana ny fahafahan'ny otrikaretina sy hampitomboana ny halaviran'ny fiaraha-monina sy ny fahadiovana. Ny trano fandraisam-bahiny sasany dia fantatra ho mpiara-miasa amin'ny hopitaly amin'ny fametrahana toerana azo antoka, karama isaky ny fampiasana. Ny sasany kosa mifantoka amin'ny fanomezana fialofana azo antoka ho an'ireo mpizahatany eo an-toerana sy avy any ivelany ary mpizahatany izay tafahitsoka any an-tanàna noho ny fanidiana.
Raha nilaza ny heviny momba izany fivoarana izany, Gustavo Westmann, Lehiben'ny Birao misahana ny varotra sy ny fampiasam-bola, masoivoho any Brezila mankany India dia nilaza fa: "Faly aho fa manasongadina fa mpiara-miasa matanjaka amin'ny Masoivoho Breziliana i OYO nandritra ity krizy manerantany ity. Araka ny fantatsika, trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny marobe any India no nametra vetivety ny serivisin'izy ireo na nakatona, namela ny mpizahatany eran'izao tontolo izao tao anaty toe-javatra sarotra. Amin'ny alàlan'ny fananana iray amin'ireo tambajotram-hotely lehibe indrindra eto amin'ny firenena, ny ekipan'ny OYO dia afaka nanome vahaolana ho an'ireo olom-pirenena Breziliana misy teti-bola samihafa, amin'ny toerana samihafa manerana ny firenena, miaraka amin'ny matihanina ary manolo-tena lehibe amin'ny andraikitra ara-tsosialy. Ankasitrahanay ny ezaka nataon'ny OYO sy ny fiaraha-miasa amin'ny Masoivohon'i Brezila any India. ”
Nizara toy izao ny Masoivohon'i Chile: “Ny Masoivoho dia misaotra anao sy ny ekipa OYO iray manontolo noho ny fandrindrana sy ny fanohanan'ny ekipanao nandritra io fotoana io. Araka ny fantatsika rehetra rehefa nanomboka ny fipoahan'ny Covid-19 dia nisy mpizahatany marobe avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izay voatery nijanona niverina tany India noho ny famerana ny fifamoivoizana an-habakabaka iraisampirenena. Tany an-tany hafa ny mpizahatany, lavitra ny fianakaviany, ny fireneny ary ny tranony. Tamin'ity fotoana ity dia sarotra ny mahita fananana tsara sy atokisana ho an'ireo teratany vahiny amin'ny vidiny mirary. Ny mpiasa OYO dia tsara fanahy nanolotra fanampiana tamin'ny alàlan'ny hotely PAN India. Hatramin'izay, ny ekipa avy any OYO dia antso an-tariby fotsiny amin'ny ora rehetra. Ny olona mifandray dia misy foana ary nanome ny Masoivoho ny vidiny mirary indrindra. Ny Masoivoho dia misaotra indray ny ekipan'ny OYO tamin'ny ezaka sy ny fanohanany tamin'ity fotoan-tsarotra ity noho ireo mpizahatany lavitra ny tranony. ”
Ny masoivoho Royal Thai dia nanampy hoe: “Ny masoivoho Royal Thai any New Delhi dia nidera ny fanombohan'ny Ritesh Agarwal-OYO noho ny fanokafany varavarana ho an'ny hotely ho an'ireo teratany vahiny teratany India nandritra io krizy tsy mbola nisy toa azy io. Tamin'ny 30 martsa 2020, ny masoivohonay dia nanatratra ny OYO, hitady fialofana ho an'ireo teratany Thai tafahitsoka ao an-tanànan'i Amritsar. Ny fangatahana dia notanterahina tamim-piheverana feno hatsaram-panahy sy matihanina fatratra. Ny mpiasa ao amin'ny OYO dia miasa 24/7 mba hahazoana antoka fa voaray avy hatrany ny fangatahana fanampiana tsirairay avy. Misaotra an'i OYO tamin'ny fanolorany tena ho mpanohana ny Indiana sy ny vahiny tafahitsoka manerana ny tanàna rehetra any India taorian'ny fihenan'ny COVID-19. ”
Vehivavy mpizahatany iray avy any Belzika no nizara fa tafahitsoka tao Malviya Nagar, New Delhi izy ary tena nila trano honina teo akaiky teo noho ny fanidiana tampoka sy ny tsy fisian'ny fitaterana. Rehefa nampandrenesin'ny masoivoho Belzika ny ekipan'ny OYO dia niroso tamin'ny hetsika ary nanatona azy avy hatrany, nampahery azy teo am-pitadiavana ireo fananana OYO teo akaiky teo. Raha vantany vao fantatra ny fananana, dia nifandray tamina finday hatrany ny mpiasan'ny OYO iray ary nitarihany azy tany amin'ilay trano ary niantoka ny fisavana nataony.
Ireo mpiasan'ny vondrona hotely manerana an'izao tontolo izao dia niara-nivory ihany koa hanangana tahirim-bola ho an'ny fiahiana ara-bola izay hampiasaina ho an'ny tombotsoan'ny mpiasa ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, ny mpiara-miombon'antoka ary ny mpiasan'izy ireo amin'ny toe-javatra misy fiantraikany toy ny COVID. -19 areti-mifindra na ny famerana vokatr'izany. Ity famatsiam-bola ity dia hampiasaina ihany koa ho an'ny fiadanan'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny rehefa tojo toe-javatra sarotra amin'ny ho avy.